Wararka - Waa maxay heerka Cadeynta IP? Maxay uga dhigan tahay muujinta la hogaaminayo?
Bandhig kasta oo hogaaminaya dadku way ogyihiin in muujinta banaanka hore ay tahay inay lahaato heer IP caddeyn fiican ah si loo hubiyo tayada wanaagsan.
R&D injineerada YONWAYTECH LED bandhigay hadda si fudud u kala soocaan aqoonta LED bandhigay bandhigay biyuhu kuu.
Guud ahaan, heerka ilaalinta shaashadda muujinta LED-ga waa IP XY.
Tusaale ahaan, IP65, X waxay muujineysaa heerka ka-hortagga boodhka iyo ka hortagga duullaanka shisheeye ee shaashadda muujinta LED-ka.
Y waxay muujineysaa heerka xiritaanka qoyaanka-caddaynta iyo duulaanka biyaha aan caddayn ee shaashadda muujinta LED.
Markay tiradu sii weynaato, heerka ilaalinta ayaa sareysa.
Aynu ka hadalno muhiimadda ay leeyihiin tirooyinka X iyo Y siday u kala horreeyaan.
X macnaheedu waa lambarka lambarka:
0: Lama ilaaliyo. Looma ilaalin doono taabashada iyo soo gelida walxaha.
1:> 50mm. Dusha sare oo kasta oo jirka ah, sida dhabarka gacanta, laakiin kama ilaalineyso ula kac ula kac ah qeyb jirka ka mid ah.
2:> 12.5mm. Faraha ama waxyaabaha la midka ah.
3.> 2.5mm. Qalabka, fiilooyinka qaro weyn, iwm.
4.> 1mm Inta badan fiilooyinka, boolal, iwm.
5. Siigada la ilaaliyo Guntin boodh gebi ahaanba lama hor istaagi karin, laakiin waa inaysan gelin tiro ku filan si ay u farageliso hawlgalka qancinta qalabka; kahortagida xiriirka.
6.Bood dhagan kahortagida xiriirka.
Y macnaheedu waa lambarka lambarka:
0. Lama ilaaliyo.
1. Biyo daadinta. Daadinta biyaha (dhibicyo si toos ah hoos ugu dhacaya) ma yeelanayaan saameyn waxyeello leh.
2. Biyo qulqulaya marka la leexiyo ilaa 15 °. Biyaha qulqulaya ee daadanaya wax saameyn ah kuma yeelan doonaan marka xayndaabku u janjeero xagal ilaa 15 ° ka ah sida caadiga ah.
3. Biyo ku xereen. Biyaha ku daadanaya sida buufinta xagal kasta oo u jirta illaa 60 ° xagga toosan ma yeelaneyso saameyn waxyeello leh.
4. Biyo saydinta. Biyaha ku firdhinaya xayndaabka dhinac kasta ha noqotee ma yeelanayaan saameyn waxyeello leh.
5. Diyaaradaha biyaha. Biyaha lagu saadaalinayo biiyaha (6.3mm) ee ka soo horjeedka xiritaanka jiho kasta ma lahan wax saameyn ah oo waxyeello leh.
6. Diyaarado biyo xoog leh. Biyaha lagu saadaaliyay dayuuradaha awooda badan (12.5mm biiyaha) oo ka soo horjeedda xayndaabka dhinac kasta ha u soo maro ma lahan waxyeelo waxyeello leh
7. Gelinta ilaa 1m. Dhexgalka biyaha ee tirada waxyeellada leh suurtagal ma noqon doonto marka xayndaabka lagu dhex shubo biyaha iyadoo la raacayo xaalado qeexan oo ah cadaadis iyo waqti (illaa 1 m quusin).
8. Quusin ka baxsan 1m. Qalabku wuxuu ku habboon yahay quusin joogto ah oo biyo ah duruufaha ay qeexi doonto soo saaraha. Caadi ahaan, tani waxay macnaheedu noqon doontaa in qalabka si hermetically ah loo xiray. Si kastaba ha noqotee, iyadoo la adeegsanayo noocyo qalab ah, waxay macnaheedu noqon karaa in biyuhu soo gali karaan laakiin kaliya qaab noocaas ah oo aan wax saameyn ah oo aan waxyeello lahayn lahayn aysan keenin.
Waxaan arki karnaa in kala-soocida biyaha-bannaanka ee gudaha iyo bannaanka ee bandhigyada LED-ka ay ka duwan yihiin.
Heerka banaanka ee biyuhu wuxuu guud ahaan ka sarreeyaa kan gudaha.
Sababtoo ah waxaa jira bandhigyo LED-ka bannaanka ka badan maalmaha roobka ama u baahan biyo la'aan marka loo eego bandhigyada gudaha ee gudaha.
Tusaale ahaan, way kuu fududaan kartaa inaad fahamto xuduudaha biyuhu ka xiran yihiin ee shaashadda muujinta LED-ka.
Heerka ilaalinta shaashadda bandhiggu waa IP54, IP waa warqadda calaamadeynta; nambarka 5 waa nambarka ugu horeeya calaamadeynta, nambarka 4na waa lambarka calaamadeynta labaad.
Lambarka koowaad wuxuu muujinayaa heerka difaaca ee xayndaabku ka bixinayo ka-hortagga qaybaha halista ah (tusaale ahaan, qaboojiyeyaasha korantada, qaybaha dhaqaaqa) iyo soo gelidda walxaha shisheeye ee adag. Lambarka labaad wuxuu muujinayaa heerka ilaalinta ee aan biyuhu lahayn.
Heerka biyuhu ee shaashadda midabkeedu yahay midab buuxa oo dibadda ah waa IP65.
6 waa in laga hortago walxaha iyo boodhka inay galaan shaashadda.
5 waa in laga hortago in biyuhu galaan shaashadda marka la buufinayo.
Dabcan, wax dhibaato ah kumajiraan muujinta hogaaminta leh duufaan roob.
YONWAYTECH waxay tijaabisay dhammaan bandhigyadeena banaanka ka hor intaan la keenin, heerka ilaalinta IP-ga ee golaha dibadda ee soo bandhigida LED-ka waa inay gaaraan IP65 si loo gaaro dareenka dhabta ah ee waxqabadka biyaha iyo kalsoonida leh.